သင့်ဘဝမှာ ‌တစ်‌ကြိမ်လောက်တော့ ရောက်ဖူးသင့်သည့် အံ့ဖွယ်နေရာများ - ONE DAILY MEDIA
မကြာခဏ ခရီးမသွားခဲ့ခြင်းအတွက်ကြောင့် အမေရိကန်လူမျိုး ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းက နောင်တရခဲ့ကြကြောင်း စစ်တမ်းက ဖော်ပြထားပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံ‌ေတွသို့ ခရီးသွားခြင်းက ဘဝရဲ့ အကြီးမားဆုံး ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နေရာအသစ်တွေက သင့်လူနေမှုပုံစံကို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး စိတ်ကူးသစ်များအတွက် လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး သင့်ကို မိတ်ဆွေသစ်တွေရရှိစေပါတယ်။
ယခုအခါမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ပေ့ခ်ျကနေ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ခရီးထွက်လျှင် သွားကိုသွားသင့်သည့် နေရာတွေကို စုစည်းပြီး တင်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) Devil’s Bridge, Germany
(၂) Deadvlei, Namibia
A post shared by (@miroslav_expert)
(၃) ဂျယ်လီငါးကန်, Palau
(၄) ကြယ်ပင်လယ် Maldives
(၅) 5. Vinicunca သက်တံ့တောင်, Peru
A post shared by Ujj (@ujjwal_travels)
(၆) Salar De Uyuni, Bolivia
A post shared by Girls in travel. Девичники (@girlsintravel)
(၇) ပန်းရောင်သဲကမ်းခြေ, Bahamas
(၈) Crooked တော, Poland
A post shared by C. E. (@c.e.b.lol)
(၉) Hillier ကန် Australia
(၁၀) အကြီးစားCrystal လှိုဏ်ဂေါင်း, Mexico
A post shared by The Holistic Mystic (@the_holistic_mystic_1111)
(၁၁) John Day Fossil Beds National Monument, US
A post shared by Shayne Strigle (@strigle_images)
(၁၂) လှိုဏ်ဂေါင်း, US
A post shared by Sofía Amaro Castañeda (@sofanamaro)
(၁၃) Kelimutu, Indonesia
(၁၄) Mendenhall ရေခဲမြစ်, US
(၁၅) Al Naslaa, Saudi Arabia
A post shared by World lists (@top_10_new)
(၁၇) Richat ပုံစံ, Mauritani
(၁၈) . One’uli ,ကမ်းခြေ US
(၁၉) 1ယGeneral Carrera ကန်, Chile
(၂၀) Iguazuရေတံခွန်, Brazil
A post shared by 阿部 瑞穂 (@mizuho75)
(၂၁) Uluru Monolith, Australia
A post shared by Fabian (@felbicfa)
(၂၂)Danakil Depression, Ethiopia
A post shared by April Sabangan (@aprilswrld)
(၂၃) Fingalဂူ, Scotland
A post shared by Craig Burrows (@craigphotography)
(၂၄) သွေးရေတံခွန်, Alaska
(၂၅) Ruby ရေတံခွန်, US
A post shared by themissionsguru (@themissionsguru)
(၂၆) Rhone နှင့် Arve မြစ်, Switzerland
A post shared by Miracles of Nature (@miracles__of__nature)
(၂၇) ကြောင်ကျွန်း, Japan
A post shared by @aoshima_cat
(၂၈) အချစ်လှိုဏ်ခေါင်း, Ukraine
A post shared by Urlaubstracker.de (@urlaubstracker)
(၂၉) Travertine ရေကူးကန်, Turkey
(၃၀) အကြီးမားဆုံးလမ်းမကြီး, Ireland
A post shared by Travel iPhone Photographer  (@curiouswuwu)
ထိုပုံတွေကတော့ တကယ်ကို သွားလည်ချင်စရာတွေကြည့်ပါပဲနော်။ ပရိတ်သတ်ဆွေ သွားလည်ဖူးခဲ့တဲ့ နေရာကောင်းလေးတွေရှိရင်လည်း ကောမန့်မှာ လမ်းညွှန်ပေးခဲ့ပါအုန်းနော်။ နောင်လည်း ယခုလို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများကို ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ပေ့ခ်ျလေးကို Like & Followပြုလုပ်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိ‌‌ေနတဲ့ ထူးဆန်းသည့်အရာများ